sitemap.xml error on wordpress - MYSTERY ZILLION
sitemap.xml error on wordpress
March 2013 edited March 2013 in Wordpress
ကျွန်တော့် blog မှာ sitemap ထည့်ချင်တဲ့အတွက် wordpress Plugin ကို http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/ ကနေယူပြီးသုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် www.winmyotun.com/sitemap.xml ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာ
<pre>Error loading stylesheet: An unknown error has occurred (805303f4)</pre>
ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်။ အောက်မှာ Print screen ဖမ်းပြီး Error ဖြစ်ပုံကို တင်ထားပါတယ်။
<img class="aligncenter" alt="" src="http://i1131.photobucket.com/albums/m556/winmyotun/Mysteryzillion/xml_zps1e7128f1.jpg"; width="744" height="156" />
http://www.rosamundwo.com/2011/solved-google-xml-sitemap-stylesheet-error/ ဆိုတဲ့ Link မှာ အဲဒီလိုမျိုး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြထားပေမယ့် ကျွန်တော်လိုက်လုပ်တာမရပါ။ အဲဒီမှာပါတဲ့အတိုင်း .htaccess ကို ပြင်ပါတယ်။ မရပါ။ အဲဒီမှာပါတဲ့အတိုင်း wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php ကိုလည်း ပြင်ပါတယ်။ မရပါ။
ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာရယ် သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သုံးတဲ့ Hosting က Hourb ပါ။
I think, your xml "www.winmyotun.com/sitemap.xml" is valid. If you want to submit your sitemap to search engine such as google webmaster tools, you can use rss or atom feed. Your site is not static, regenerating the sitemap whenever you update the website will be very troublesome.